Yeremia 29 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Krataa a Yeremia de kɔmaa wɔn a wɔde wɔn kɔɔ Babilon no (1-23)
Israelfo bɛsan akɔ wɔn kurom mfe 70 akyi (10)
Asɛm a wɔka kyerɛɛ Semaia (24-32)
29 Odiyifo Yeremia krataa no mu nsɛm ni. Ɔsoma ma wɔde fii Yerusalem kɔmaa wɔn a wotuu wɔn ase kɔe no mpanyimfo a aka, ne asɔfo, ne adiyifo, ne ɔmanfo a na Nebukadnesar atu wɔn afi Yerusalem kɔ Babilon no nyinaa. 2 Ɔde krataa no kɔe bere a Ɔhene Yekonia,+ ne ɔhemmaa,*+ ne ahemfi mpanyimfo, ne Yuda ne Yerusalem mpanyimfo, ne adwumfo ne atomfo* no fi Yerusalem kɔe no.+ 3 Ɔde krataa no somaa Safan+ ba Elasa ne Hilkia ba Gemaria a Yuda hene Sedekia+ somaa wɔn Babilon sɛ wɔnkɔ Babilon hene Nebukadnesar nkyɛn no. Emu nsɛm ni: 4 “Eyi na asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no reka akyerɛ wɔn a wotuu wɔn ase kɔe no nyinaa, wɔn a mema wɔde wɔn fii Yerusalem kɔɔ Babilon no, 5 ‘Munsisi adan na montenatena mu. Monyɛ nturo na munni mu aba. 6 Monwareware yerenom na monwo mma mmarima ne mma mmea. Monwareware yerenom mma mo mma mmarima na momfa mo mma mmea mma aware, na wɔn nso wɔnwo mma mmarima ne mma mmea. Monnɔɔso wɔ hɔ, na mommma mo dodow so nntew. 7 Na monhwehwɛ asomdwoe mma kurow a mama wɔatu mo ase kɔ mu no, na mommɔ Yehowa mpae mma kurow no, efisɛ sɛ enya asomdwoe a na mo nso mubenya asomdwoe.+ 8 Na nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka ni: “Mommma mo adiyifo ne wɔn a mokɔ wɔn nkyɛn abisa a wɔwɔ mo mu no nnnaadaa mo,+ na munntie wɔn adae a wɔsoso no. 9 Efisɛ ‘nkɔm a ɛnyɛ nokware na wɔhyɛ kyerɛ mo wɔ me din mu. Mensomaa wɔn,’+ Yehowa asɛm ni.”’” 10 “Nea Yehowa aka ni, ‘Sɛ mfe 70 no ba awiei wɔ Babilon a, metwa m’ani abɛhwɛ mo,+ na bɔ a mehyɛe sɛ mɛsan de mo aba ha no, mɛma aba mu.’+ 11 “‘Na me ara minim adwene a madwen wɔ mo ho,’ Yehowa asɛm ni. ‘Ɛyɛ asomdwoe adwene, na ɛnyɛ mmusu;+ ɛne sɛ, mɛma mo daakye ne anidaso.+ 12 Mobɛfrɛ me, na mobɛba abɛbɔ me mpae, na metie mo.’+ 13 “‘Mobɛhwehwɛ me na moahu me,+ efisɛ mode mo koma nyinaa na ɛbɛhwehwɛ me.+ 14 Mɛma moahu me,’+ Yehowa asɛm ni. ‘Na mɛboaboa mo nkurɔfo a wɔakyere wɔn kɔ no ano, na meyi mo afi aman nyinaa mu ne mmeae a mebɔɔ mo hwetee no nyinaa na maboa mo ano,’+ Yehowa asɛm ni. ‘Na mɛsan de mo aba baabi a mituu mo ase fii no.’+ 15 “Nanso moka sɛ, ‘Yehowa ama yɛn adiyifo wɔ Babilon.’ 16 “Eyi ne nea Yehowa aka akyerɛ ɔhene a ɔte Dawid ahengua so+ ne nnipa a wɔtete kurow yi mu nyinaa, mo nuanom a wɔantu wɔn ase anka mo ho ankɔ no. 17 ‘Nea asafo Yehowa aka ni: “Hwɛ, mede sekan ne ɔkɔm ne nsanyare a edi awu* reba wɔn so,+ na mɛma wɔayɛ sɛ borɔdɔma a aporɔw,* borɔdɔma a enye koraa a wudi a ɛnyɛ yiye.”’+ 18 “‘Na mede sekan+ ne ɔkɔm ne nsanyare a edi awu bɛtaa wɔn so, na mɛma wɔadan biribi a ɛyɛ hu ama asaase so ahenni nyinaa,+ na mɛma wɔayɛ nnome ne ade a ɛyɛ ahodwiriw ne ade a nkurɔfo bɛtɛɛ wɔn anom ahwɛ*+ ne ade a ɛyɛ animguase wɔ aman a mɛbɔ wɔn ahwete so no nyinaa mu,+ 19 efisɛ wɔantie me nsɛm a mede somaa me nkoa adiyifo no kɔmaa wɔn no,’ Yehowa asɛm ni. ‘Na mesomaa wɔn mpɛn pii.’*+ “‘Nanso moantie,’+ Yehowa asɛm ni. 20 “Ɛno nti, mo a wɔatu mo ase kɔ nyinaa, mo a mede mo fii Yerusalem kɔɔ Babilon no, muntie Yehowa asɛm. 21 Nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka afa Kolaia ba Ahab ne Maaseia ba Sedekia a wɔhyɛ nkɔm a ɛnyɛ nokware wɔ me din mu no ho ni,+ ‘Hwɛ, mede wɔn bɛhyɛ Babilon hene Nebukadnesar* nsa, na obekunkum wɔn wɔ mo anim. 22 Na nea ɛbɛto wɔn no, Yudafo a wɔatu wɔn kɔ Babilon no de bɛdome, na wɔaka sɛ: “Yehowa nyɛ wo sɛ Sedekia ne Ahab a Babilon hene tõtõõ wɔn wɔ ogya mu no!” 23 Efisɛ wɔayɛ aniwude wɔ Israel;+ wɔne wɔn yɔnko yerenom sɛee aware, na wɔkaa nsɛm a ɛnyɛ nokware wɔ me din mu bere a menhyɛɛ wɔn saa.+ “‘“Me na minim, na mene ɛho dansefo,”+ Yehowa asɛm ni.’” 24 “Semaia+ a ofi Nehelam nso, ka kyerɛ no sɛ, 25 ‘Nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka ni: “Wode nkrataa akɔma nnipa a wɔwɔ Yerusalem nyinaa, ne Maaseia ba ɔsɔfo Sefania,+ ne asɔfo no nyinaa wɔ wo din mu sɛ, 26 ‘Yehowa ayɛ wo ɔsɔfo de wo asi ɔsɔfo Yehoiada anan sɛ hwɛ Yehowa fi so, na hwɛ kyere ɔbɔdamfo biara a ɔbɛyɛ n’ade sɛ odiyifo, na fa ne nan ne ne nsa bɔ dua mu, na fa ade bram ne kɔn akyi;*+ 27 enti Yeremia a ofi Anatot a wayɛ ne ho sɛ mo diyifo no, adɛn nti na muntwiw n’anim?+ 28 Ɛno nti na wasoma aba yɛn nkyɛn wɔ Babilon ha abɛka sɛ: “Ɛbɛkyɛ! Munsisi adan na montenatena mu. Monyɛ nturo na munni mu aba,+—”’”’” 29 Bere a ɔsɔfo Sefania+ kenkan krataa yi kyerɛɛ odiyifo Yeremia no, 30 Yehowa ka kyerɛɛ Yeremia sɛ: 31 “Soma kɔka kyerɛ wɔn a wɔatu wɔn ase de wɔn kɔ no nyinaa sɛ, ‘Nea Yehowa aka wɔ Semaia a ofi Nehelam ho ni: “Esiane sɛ Semaia ahyɛ mo nkɔm bere a mensomaa no, na ɔyɛe sɛ ɔbɛma mode mo ho ato asɛm a ɛyɛ atoro so nti,+ 32 nea Yehowa aka ni, ‘Hwɛ, meredan m’ani aba Semaia a ofi Nehelam ne n’asefo so. Ne busuani baako mpo renka ɔman yi mu, na ɔremfa n’ani nhu papa a mɛyɛ me man no,’ Yehowa asɛm ni, ‘efisɛ wahyɛ nkurɔfo nkuran sɛ wɔntew atua ntia Yehowa.’”’”
^ Anaa “ɔbaapanyin.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “abantofo.”
^ Anaa “ɔyare.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “borɔdɔma a apae.”
^ Nt., “mesɔre somaa wɔn anɔpatutuutu.”
^ Anaa “fa dade bram ne kɔn akyi.”